Myat Shu -
You are here : Myat Shu
မူလဘူတ အညာသွေး (၁)
Published By Myat Shu On Thursday, December 30th 2010. Under ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ အတွေးများ
လမ်းဘေးဝဲယာရှိ ထန်းတောအုပ်မြိုင်မြိုင်ကို တမျှော်တခေါ်ကြီး တွေ့လိုက်ရကတည်းက အညာအငွေ့အသက် ကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်လိုက်မိပါပြီ။ ထနောင်းပင်၊ ရှားပင်၊ မန်းကျည်းပင်၊ တမာပင် စတဲ့ အညာရဲ့ ဖွားဘက်တော်များ ကားလမ်းတလျှောက်တွင် တရိပ်ရိပ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကျောက်စရစ်ခဲတွေ ဖွာလန်ကြဲနေသော ကတ္တရာလမ်း မပီ့တပီလမ်းကို ကွေ့ရှောင်ပြီး စက်မှုဇုန်ထုတ် ဂျစ်ကားလေးသည် နောက်ဆုံးမတော့ လှည်းလမ်းပေါ်ကိုသာ ဆင်းမောင်းကာ ဖုန်တောထဲတွင် ရုန်းရှာတော့သည်။ သို့ပေမယ့် ဖုန်မထ။ ပခုက္ကူဒေသတစ်ဝိုက်တွင် ယခုနှစ် မေလနှောင်းပိုင်းမှ စတင်ရွာသည့် မိုးဦးကြောင့် မြေသင်းနံ့သာ ထောင်းထောင်းဝေ့တက်လျက်။ အိနြေ္ဒရရ ခပ်ဖွဲ ဖွဲလေးရွာနေသည့် မိုးစက်များအောက်တွင် ယာတောထဲမှ ယာတောသူတို့၏ ဟေးကနဲ … ၀ါးကနဲ အော်သံများ ကို ကားပေါ်မှာ လိုက်ပါသွားရင်းပင် ... Continue Reading
လွမ်းပွင့်ထုံတဲ့ ပွဲညများ (၂)
Published By Myat Shu On Sunday, December 26th 2010. Under ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ အတွေးများ
(၄) ကျွန်မတို့ အိမ်က အနီးအနားက ရပ်ကွက်တိုင်းလိုလိုရဲ့ ဘုရားပွဲအတွက် ဘုရားကြေး ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသလို ဆွမ်းတော် ပန်းကန်ပြားလည်း ယူပါတယ်။ ဘုရားကြေးဆိုတာ စာရေးတံမဲအတွက်ပေါ့။ တချို့တွေက ၀န်မပိအောင် တစ်ရက်ကို ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှဆိုပြီး စုကြတယ်။ ညနေတိုင်း ရပ်ကွက်ရဲ့ ဦးစီးမှုနဲ့ ဘုရားကြေး လာကောက်တဲ့သူရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ ၅ ကျပ် ထည့်မလား၊ ၁၀ ထည့်မလား။ (အခုတော့ ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀ စသဖြင့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့။) အဲသလို စုသွားလိုက်တာ ဘုရားပွဲရောက်တော့ စာရေးတံအတွက် ငွေအလုံးအရင်း လှူစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်စုငွေနဲ့ကိုယ် ထည်ထည်ဝါ၀ါ လှူနိုင်တန်းနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားပွဲ မတိုင်မီ နှစ်ရက်အလိုမှာဆိုရင် ရပ်ကွက်က ဆွမ်းတော် ပန်းကန်ပြား လိုက်ဝေပါတယ်။ ... Continue Reading
လွမ်းပွင့်ထုံတဲ့ ပွဲညများ (၁)
(၁) ကြက်သွေးရောင် ကတ္တီပါကားလိပ်ကြီးရဲ့ နဖူးစီးမှာ “ပန်တျာနေ၀င်းမောင်” ဇာတ်ဆိုတဲ့ ရွှေရောင်စာလုံးကြီးကို စလိုက်မီးအရောင်ကြောင့် ထင်ထင်ရှားရှား ပြတ်ပြတ်သားသားကြီး မြင်နေရတယ်။ ဒီည ကပြအသုံးတော်ခံမှာက ခေတ်ပေါ် မြန်မာတေးသံသာနဲ့ စတိတ်ရှိုး၊ ပြီးရင် “အမွေလို အကြံပိုင်ရတယ်” အော်ပရာနဲ့ မင်းသိင်္ခရဲ့ “မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော” ဇာတ်လမ်း၊ နို့ပြီး နှစ်ပါးခွင်နဲ့“ဝေသန္တရာ” ဇာတ်တော်ကြီးတဲ့။ အစီအစဉ် ကြေငြာတဲ့သူကလည်း “ယနေ့ည မိဘပြည်သူများကို ပန်တျာနေ၀င်းမောင် ဇာတ်အဖွဲ့က တတ်စွမ်းသမျှ အနုပညာအားနဲ့ အားပါးတရ ဖျော်ဖြေသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားသမျှကို အသုံးတော်ခံရင်း ရင်နှစ်ခြမ်း ဗြန်းဗြန်း ကွဲချင်ကွဲပါစေခင်ဗျ။ ဒီနှစ် ပွဲရာသီအတွက် အထူးတင်ဆက်ထားတဲ့၊ ဘယ်ပွဲမှာမှ မကပြရသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် အသစ်တွေ ပါတဲ့အကြောင်း ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, December 26th 2010. Under ထင်ရာမြင်ရာ
တလောက သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ဘွိုင်းဖရင့်နဲ့အတူ နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်ဆီမှာ ဗေဒင်သွားမေးပါတယ်။ နောက်တစ်ရက် နှစ်ရက်ကြာတော့ နင် စနေသားမလား၊ အဲဒါဆိုရင် ငါယတြာချေတာကို ကူစမ်းပါ လို့ ဆိုလာပါတယ်။ ယတြာချေရခြင်း အကြောင်းရင်းကို စပ်စုကြည့်မိတော့ အဘဆရာကြီးက ဓမ္မာ သောက အင်းဝ ရာဇာ သဘောအရ နင်တို့ နှစ်ယောက်နီးဖို့ အကြောင်းမရှိ၊ တကယ်လို့ ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ .. ယတြာချေရမယ်လို့ ဟောတယ်ဆိုပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ယကြာချေရတာပါလို့ အပူသည်ရုပ်နဲ့ ခပ်ကုပ်ကုပ် ဖြေပါတယ်။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်နဲ့ အတူ ဗေဒင်ဟောခတွေလည်း ပြောင်းလဲကုန်ပြီ ... Continue Reading
ဥုံ အရဟံ သစ္စာ ဂတိတွေနဲ့ ဂဠုန်သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
Published By Myat Shu On Sunday, December 26th 2010. Under သူတို့အာဘော်
သုပဏ္ဏက ဂဠုနရာဇာဘွဲ့ကို ခံယူပြီး အဖိနှိပ်ခံတို့ကို ခေါင်းဆောင်ကာ အုပ်စိုးသူနယ်ချဲ့ကို တွန်းလှန်ခဲ့သည့် ဆရာစံနှင့် တောင်သူလယ်သမား တော်လှန်ရေး ရဲဘော်အပေါင်းတို့၏ အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှာ ယခုအခါတွင် နှစ်ပေါင်း (၈၀) ပြည့်ခဲ့လေပြီ။ နယ်ချဲ့အရင်းရှင်တို့၏ အမြင်တွင်မူ ထိုတောင်သူလယ်သမားအရေးတော်ပုံသည် မှော်ပဥလက်ဂါထာမန္တရားတို့ဖြင့် ထုံမွှမ်းထားသည် ပဒေသရာဇ် မင်းလောင်းမျှော် ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ သူပုန်ထမှု တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ချေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဗမာတို့၏ အမြင်တွင်မူ ၎င်းတော်လှန်ရေးသည် ရရာလက်နက်ကို စွဲကိုင်၍ အုပ်စိုးသူနယ်ချဲ့ကို တော်လှန်ကာ ဗမာ့သွေးကို ပြခဲ့သည့် မဟာအရေးတော်ပုံကြီး တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ချေ၏။ အင်အားချင်း မတူသည်ကို ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, December 6th 2010. Under ၀တ္ထု
(၁) ဧရာဝတီသင်္ဘောအိုကြီးသည် မကြာမီတွင် ခရီးဆုံးမြို့ကလေးသို့ ဆိုက်ကပ်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် လေးတွဲ့သော ဥသြသံကို ပြု၏။ ဥသြဆွဲသံကို ကြားရသော် ခရီးသွား ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေးသူငယ်တို့သည် ပဒူအုံကို တုတ်ဖြင့်ထိုးလိုက်သည့်အလား လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်သွားကြလေ၏။ ဟဲ့ ကလေးတွေ အိပ်မနေနဲ့လေ။ ထတော့ ထတော့။ မြို့ကပ်ခါနီးပြီ။ ပစ္စည်းတွေ မေ့ကျန်နေဦးမယ်။ အထုပ်တွေ သိမ်းကြစို့။ ဟဲ့ ဘယ်သူရေ ဘယ်ဝါရေ ... အစရှိသော အသံတို့ကြောင့် သဘောင်္တစ်စင်းလုံး ကုလားသိုက် ကျားဝင်ကိုက်သည့်အလား အရပ်ပျက်သွားလေ၏။ ရန်အောင်မင်္ဂလာ ဆန်စက်ကို လွန်သော် မြို့ကလေးကို ခပ်ရေးရေး မြင်ရလေပြီ။ မြောက်မြားလှစွာသော ဆန်စက်၊ ဆားစက်တို့၏ မီးခိုးခေါင်းတိုင်တို့ အခိုးတလူလူ လွှင့်ထုတ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, November 30th 2010. Under အမှတ်တရ
အမျိုးသားနေ့ဖတ်စာ ယနေ့သည်ကား ကျွန်ုပ်တို့ ဗမာပြည်၏ အမျိုးသားနေ့ပင်တည်း။ အမျိုးသားနေ့ဟု ဆိုလိုက်လျှင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ရရှိရန် လှုပ်ရှားခြင်း၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းတို့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့် စသည်တို့နှင့် ရောထွေးကာ မဆီမဆိုင် ထွေးရော ယှက်တင် တွေးတော ကြံဆတတ်ကြသော ကမ္ဘာ့အမြင်ရှိသူ မျိုးဆက်သစ်တို့နှင့် ဗမာပြေမှာ ပညာသင်ရတာ မကောင်းရင် တခြားမှာ ထွက်သင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပေါ့ဟု ဆိုရက်သသူတို့ တိုးတက် လိမ္မာစေရန် အလို့ငှာ အကျွန်ုပ် မောင်ကြပ်ခိုးသည် ထိုသူတို့အား မိမိ သိထားသလောက် မတောက်တခေါက် ဗဟုသုတဖြင့် ဆရာလုပ်တော့အံ့ ဟူသော ညစ်ပတ်သည့် စိတ်ထားဖြင့် ဤ အမျိုးသားနေ့ဖတ်စာကို အထူးထူးသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာတို့မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ချေသတည်း။ မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော ... Continue Reading
Follow myatshu On Twitter